တစ်ကြိမ်လောက်ပါပဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်ကြိမ်လောက်ပါပဲ…
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jul 31, 2012 in Creative Writing, Poetry | 36 comments
မွန်မွန်ရဲ့ ကဗျာ အဖေ့အလွမ်းပြေ
အဖေ လို့ အားရပါးရလေး ပြန်ခေါ်ပါရစေ…
အဖေ့လက်မောင်းကိုကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပါရစေ…
အဖေနင်းတဲ့စက်ဘီးနောက်က ခဏလေး လိုက်ပါရစေ…
အဖေ့လက်ရာ ငါးရံ့ဆန်လှော်ဟင်းပူပူလေး နည်းနည်းစားပါရစေ…
သူချက်ကိုယ်ချက်နဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ ဟင်းလုချက်ပါရစေ…
ဟင်းချက်ရင်းနဲ့ အမေ့အကြောင်း တိုးတိုးလေး ပြောပါရစေ…
ငါ့သမီးပြန်လာပြီ ဆိုတဲ့ အသံလေး ကြားပါရစေ…
အဖေ၀တ်နေကျ ဂျာစီအကျီတစ်ထည်လောက် ၀ယ်ပေးပါရစေ…
ခွင့်လွှတ်ပေးပါ အဖေ….။ ။
တရားနဲ့ဖြေပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါ အပြင်းအထန် လွမ်းမိပါတယ်….
ကဗျာကို ဖတ်ရင်း …
ကဗျာထဲက သမီးလေး နေရာက ခံစားရင်း ..
ရင်ထဲမှာ နင့်ခနဲ ဖြစ်သွားမိပါရဲ့ဗျာ …….
တကယ်ပါပဲ …. :- |
မွန်မွန့်နေရာက ခံစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…
စိတ်တောင်မကောင်းပါဘူး ။ဖတ်ပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရောက်မှဘဲ အဖေကို တစ်ကြိမ်လောက်ပါပဲ အဖေပိုက်ဆံပျက်နေလို့ မုန့်ဖိုးနည်းနည်းပေးပါအုံးအဖေ။။
ညာ နဲ့ စနိုးရေ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖေနဲ့အတူတူနေနေရတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါနော်…
ဘယ့်နှယ်ပြောပါလိမ့် ကိုဆာမိရယ်… မိဘအရိပ်လောက် အေးမြတာမှ မရှိတာ… အဖေဆိုတဲ့ အားကိုးရာကို တမ်းတကြတာပေါ့… ခဏတာဆိုရင်သာ မသိသာပေမယ့်.. တစ်သက်တာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ တကယ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ပြန်လိုချင်မိတာပါ…
မမွန်မွန်ရေ တစ်ကြိမ်တွေများပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ်သာတွေဆုံစေဖို့
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း ထပ်တူခံစားပေးသွားပါတယ်နော် …
မွန်မွန်ရေ ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး တကယ့်ကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်
မနွယ်ပင် နဲ့ နိုရာရေ.. ထပ်တူခံစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
လေးပေါက်ရေ… ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်ကျမတတ်ပါပဲ..
မှတ်မှတ်ရရ အဖေက တစ်ခါပဲ ရိုက်ဖူးတယ်… တစ်ခါကတော့ စိတ်ဆိုးပြီး remote နဲ့ ကောက်ပေါက်ဖူးတယ်…
အဲဒီလို ဆူမယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ကြိမ်လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လိုချင်မိပါတယ်…
မွန်မွန့်စာကိုဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ကျချင်တယ်။
ငယ်ငယ်က အဖေနဲ့အမေက နယ်မှာနေပြီး မောင်နှမတွေချည်းပဲ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းလာတက်ရတော့….
ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်တွေ လိုက်ပြတာ၊
လိုချင်တာမှန်သမျှ ဘာပဲပူဆာပူဆာ ၀ယ်ပေးတာတွေကို သတိရမိသွားတယ်။ [:-((]
အဖေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေကို အားကျမိပါတယ် မမရေ.. မွန်မွန်ကတော့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း နောင်တတွေက ပိုများနေသလိုပဲ…
တစ်ကယ်ကို ဟက်ထိမိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါဘဲ
မောင်ပေ့ အဖေဆုံးတာ ၁၅နှစ်ပြည့်အတွက် သြဂုတ်လထဲမှာ ကောင်းမှုလုပ်တော့မှာပါ
အဖေဆုံးချိန်က ကလေးသာသာ ဘာမှ မသိနားမလည်သေးလို့ ၊ ငိုတောင် မငိုဖြစ်ခဲ့တာတွေ
၁၅ နှစ်တောင် ရှိသွားပြီလား.. ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကပေရေ… ကလေးဘ၀ကတည်းက အဖေကို ဆုံးရှုံးခဲ့တာဆိုတော့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး.. မွန်မွန့်အဖေဆုံးတာလည်း မေ ၃၁ က သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုပေတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကို ကိုပေ့အဖေ သိရှိခံစားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်…
မမဝေဝေ ငါးဆန်လှော်ဟင်းလေး ချက်ပေးနေပါ၏နောက် တာပါ. မွန်မွန်ရေ
မွန်မွန်ရေ မမဝေဝေပို့ စ်တွင် အားပါးတရ သုံးဆောင်နိုင်ပါ၏။
မမွန်မွန်ရေ — ဖတ်ပီး ထိသွားတယ်ဗျာ !” ညဘက်စကားပြောရင်းနဲ့ နင်းပေးပါရစေ…တဲ့ ” ကျွန်တော် လည်း ငယ်ငယ် က အဖေ့ ကို ညတိုင်း လိုလို နင်းပေးခဲ့တယ်လေ —
အခုသဂျီးရဲ့ ချစ်မေမေ ပို့စ်ကို ဖတ်ပီး..
ကျနော်တော့ ခင်ဗျားခံစားမှုတွေ ဖတ်လိုက်မိတိုင်း
အချိန်မှီ ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် သတိတွေပေးနေသလို မို့.. ..
ကျနော် အဖေ့ကို ပြောပုံဆိုပေါက်တွေကတော့
ရွာထဲက တချို့မိတ်ဆွေတွေ သိနေပါ့ ..
အရင်ဆုံးဖတ်သွားတဲ့အတွက်ရော၊ ပထမဆုံးလက်မလေးအတွက်ပါ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်… ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်… မွန်မွန်လည်း ရှိစဉ်တုန်းက ပြစ်မှားစော်ကားခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ.. မရှိတော့မှ နောင်တရပြီး တမ်းတနေပေမယ့်လည်း ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ နောက်လူတွေကို မွန်မွန့်လို ဖြစ်မှာစိုးလို့ ခံစားချက်လည်းပါတဲ့ ဒီလိုကဗျာလေးတွေကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ… ဒီရက်ပိုင်းတော့ အဖေ့ကို အရမ်းလွမ်းနေမိတာလည်း ပါတာပေါ့… အဖေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို အချိန်ရရင် ထပ်ရေးဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေမှာ မိဘတွေကလည်း သားသမီးတွေ ပြစ်မှားအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်…
ကိုအမတ်ပြောသလိုပဲ သတိပေးနေသလိုပဲမို့.. ပြင်စရာရှိတာပြင်ရမယ်။
ကိုပေရေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး 15 နှစ်တောင်ပြည့်ပြီတဲ့လား။
နှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာကနေ ခံစားမိသွားတယ် ဆိုတဲ့အတွက် ၀မ်းလည်းသာ၊ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နော်…
တကယ့်ကို..ထိမိ တဲ့ ကဗျာပါပဲ..။
အဲဒီလို ကဗျာလေးတွေ…ကို ကျွန်တော်…ချစ်တယ်..။
ကဗျာလေးကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မုဆိုးကျော်ကြီးရှင့်…
မွန်မွန်ရေ ဘ၀တူတွေပါ။ ခွဲသွားတာ နှစ် ၂၀ နီးပါး ရှိတော့မယ်။ ခုနေပြန်စဉ်းစားရင်တောင် ခပ်ဝါးဝါး အတိတ်မှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးတာတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။
မွန်မွန်ရယ်..ဘ၀တူမို့ထပ်တူခံစားရပါတယ်..ကိုယ့်အဖေဆုံးတုန်းကတော့ ကိုယ်က သိပ်မသိတတ်သေးတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ဝမ်းနည်းရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူးလေ..
မပု နဲ့ crystalline ရေ…
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဖေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအတွက် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်.. အကောင်းဘက်က တွေးကြည့်ရင်တော့ မသိသေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ အရမ်းမခံစားရဘူးပေါ့နော်… သိတတ်လာလေ ပိုခံစားရလေပေါ့…